कसैलाई दुःख दिन गरेको होइन, रमाइलो मात्र हो : कृषिमन्त्री पराजुली – Newsagro.com :
कसैलाई दुःख दिन गरेको होइन, रमाइलो मात्र हो : कृषिमन्त्री पराजुली
July 1, 2015 NewsAgro0Comments Agriculture, Nepal, Newsagro.com, कृषिमन्त्री हरिप्रसाद पराजुली Agriculture Minister Hariprasad Parajuli
अश्लिल हर्कत गर्ने कृषिमन्त्री पराजुलीले भने,’राजीनामा दिनु पर्ने केही गरेको छैन’
काठमाडौं, १६ असार / सार्वजनिक कार्यक्रममा महिलाहरूमाथि अश्लिल हर्कत गरेका कृषिमन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले राजीनामा नदिने बताएका छन् । रोपाइँ कार्यक्रममा महिलाहरुमाथि अश्लिल हर्कत गरेपछि मन्त्री पराजुलीको सबैतिर आलोचना भइरहेको छ भने एमाले नेतृत्वमाथि उनलाई कारबाही गर्न दबाव बढेको छ ।
‘मैले कुनै गलत नियतका आधारमा ६२ वर्षको मान्छे वेइकुफ होइन । राजीनामा दिनका लागि मैले गलत मनसायले महिला हिंसा गर्ने गतिविधि गरेको छैन ।’
‘कसैलाई दुःख दिन गरेको होइन । रमाइलो गर्ने क्रममा कसैलाई दुःख पुगेको छ भने क्षमा चाहन्छु ।’
तर, मन्त्री पराजुलीले भने आफूले कुनै गल्ती नगरेको दावी गरेका छन् । बीबीसी नेपाली सेवालाई दिएको अन्तरवार्तामा उनले भनेका छन्,‘मैले कुनै गलत नियतका आधारमा ६२ वर्षको मान्छे वेइकुफ होइन । राजीनामा दिनका लागि मैले गलत मनसायले महिला हिंसा गर्ने गतिविधि गरेको छैन ।’
क्रममा उनले घरकै आफ्नो दिदीबहिनीलाई जसरी व्यवहार गरेको उनले दाबी गरे । हात र टाउको कहाँ थियो थाहा छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले आफूले बताउ गर्दै भने,‘आउनुस् दिदी तपाई गएपछि मात्र अरु पनि आउँछन् भन्दै कम्बरमा हात राखेर निवेदन गरेको हो ।’ टाउको लगेर छातीमा हिलो पुछिएको देखिन्छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘हिड्नुस् भन्दा टाउको ठोकिएको होला थाहा छैन । भित्र जाउँ भनेको हो ।’ बढी उत्साहित भएकाले याद नभएको हो कि फोटो र भिडियो हेर्नु भएको छ भन्ने प्रश्नमा उनले ‘हेरेको छु’ भने तर, आफूले कुनै गल्ती नगरेको दाबी गरिरहे ।
तपाईकी श्रीमती वा दिदीबहिनीलाई कुनै मन्त्रीले छातिमा टाउको हिलो दलेको भए भन्ने प्रश्नमा उनले आफूले त्यस्तो गर्दै नगरेको दावी गरे । मन्त्री पुराजुलीले भने,‘हुँदै होइन । फोटो खिच्दा म होचो मान्छे छायाँ पर्‍यो होला ।’ मन्त्री ले त्यस्तो गर्दा मन्त्रीले गर्ने आचरण हो जस्तो लाग्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने,‘मन्त्रीलाई प्रमुख अतिथीका रुपमा बोलाइएको थियो । उहाँहरुको रमाइलो गर्ने चाहना रहेछ र हिलोले हान्नु भो ।’
उनले आफूले दुब्र्यवहार नगरेको र बढी प्रोपोगाण्डा गरेको आरोप समेत लगाएका छन् । उनले भने,‘कसैलाई दुःख दिन गरेको होइन । रमाइलो गर्ने क्रममा कसैलाई दुःख पुगेको छ भने क्षमा चाहन्छु ।’ अन्य देशमा भए यस्तो गर्दा बर्खास्त गर्ने थिए होला भन्ने प्रश्नमा उनले आफूले कुनै गलत मनसाय नराखेको र बर्खास्त हुने गरी कुनै काम नगरेको दाबी गरेका छन् ।
← कृषिमन्त्री प्रकरणमा कस्ले के भने ?
कृषिमन्त्री पराजुलीले राजीनामा दिए →
यो समाचार 34639 पटक पढिएकोबुटवल । रूपन्देही मत्स्य ह्याचरीमा आत्मनिर्भर बनेको छ । माछाको पकेट जिल्ला रूपन्देहीमा माछाका भुरा उत्पादनमा
यो समाचार 34256 पटक पढिएकोरासायनिक मल अनियमितता प्रकरण काठमाडौं । कृषि सामग्री कम्पनीले लिमिटेडले कमिसनका लागि फेरि डीएपी मल खरिद
यो समाचार 25575 पटक पढिएको GM Food Crops Illegally Growing in India • By Colin Todhunter The GM Contamination Register database is run
यो समाचार 6333 पटक पढिएकोम्याग्दी, मङ्सिर १६ गते । जिल्लाका किसान यान्त्रिक हलोतर्फ आकर्षित भएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका किसानले